gasy mblaogy – Entina hanandratana ny teny sy maha-Malagasy antsika
Entina hanandratana ny teny sy maha-Malagasy antsika
Tongasoa eto amin’ny » Gasy Mblaogy « .
Miarahaba anao izay mitsidika ny tranokala. Ny gasy mblaogy moa dia tranokala iray amin’ny teny Malagasy. Entina manokana mba hizarana karazana lahatsoratra maro samihafa indrindra moa fa ireo karazana lahatsoratra maro hita eto amin’ny aterineto ho amin’ny fiteny Malagasy.
Anisany tena vinan’asa lehibe ny hoe hametraka ny tenin-drazantsika amin’ny alalan’ny aterineto mba afahan’ny rehetra mitady an’ireo karazana lahatsoratra ilainy amin’ny fiteny Malagasy fa tsy voatery amin’ny teny vahiny foana. Ezaka lehibe izao atao izao ary ilaina ny fiaraha-miasan’ny tsirairay na eto aminay mpiblaogy amin’ny teny gasy na eo amintsika tsirairay avy.
Misy karazana takelaka vitsivitsy ireto izay hita eto amin’ny Gasy Mblaogy :
Marihina manokana moa fa mety misy amin’izay teny voalaza ato ihany no mety ho diso tsipelina na diso fanoratra tsotra izao, koa am-pifaliana lehibe ho anay tokoa raha lazainareo ho anay izay diso amin’ny alalan’ny pejy fifandraisana.
Koa mirary soa ho anareo izay mitsidika ny blaogy izahay mba hahita fahafam-po amin’izay lahatsoratra arosonay rehetra eto ary indrindra indrindra mirary anareo ihany koa mba ho tonga any amin’izay tanjona irinareo tsirairay avy.
Ampidiro eto ny mailakao raha toa ka te hanaraka ny blaogy amin’ny alalan’ny mailaka ianao
Miandrasa kely …
Misaotra aanao nisoratra anarana
Ialana tsiny ! Misy olana kely fa avereno sokafana indray mandeha ny pejy.
Mila faharetana ny zavatra rehetra
Fanadinam-panjakana – Nidina ny taham-pahafahana !
Ahoana ny fomba hanatanterahina ny nofinofy ?
Manatanteraka ny nofinofy
Hanaraka ny blaogy amin'ny mailaka
Ampidiro ny mailakao mba afahanao mandray ny vaovaon'ny blaogy
Ny pejy facebook
Follow gasy mblaogy on WordPress.com
Misaotra anao nitsidika ny blaogy ary mbola manantena ny fiverenanao indray amin’ny manaraka ☺